Home / Blog / Ny toro-hevitra fandroana tsara indrindra amin'ny efitra fandroana rehetra, amin'ny toerana iray ihany!
2020 / 10 / 16 FisokajianaBlog 1220 0
Kely ny trano fidiovana, saingy ampahany lehibe amin'ny haingon-trano io ary mifandray akaiky amin'ny fiainantsika. Manomboka eto ny fiainana isan'andro ary mifarana eto. Raha tsy apetraka araka ny tokony ho izy, ny fampiasana ny fizotrany dia mora foana amin'ireo sasany amin'ireo sy ny olana hafa, androany potika ny fidiovana, rahampitso voasakana ny fandroana …… isan'andro dia mahalasa adala anao.
Satria tena zava-dehibe amin'ny fandroana isan'andro ny trano fandroana, koa rehefa manaingo ny trano fidiovana isika dia tsy maintsy mifehy ny lafiny rehetra amin'ny antsipiriany, mba hiezaka ny hisoroka ny fiantraikan'ny fiainana isan'andro.
Fanamarihana fanavaozana ny fandroana
1,Reserve ny rano sy ny jiro elektrika
Ny fanavaozana ny fandroana, matetika ny sakaizan'ny sakaiza no manadino ny famatsiana herinaratra bebe kokoa sy ny lalan-drano, avy eo manova ny kabine malefaka ary ny fatotra lamba famaohana elektrika dia mety hitarika amin'ny fampiasana fahasahiranana.
2,Olana amin'ny rindrina sy gorodona
Ataovy farafahakeliny 24 ora alohan'ny hametrahana andrana fanidiana rano mihidy; taila gorodona sy taila rindrina amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny seam, ny taila fanaovana birao mba hahazoana antoka fa ny velaran'ny biriky dia manana 1 ° momba ny tehezan'ilay tatatra, ny fitongilanana dia tokony ho any amin'ny tatatra gorodona.
3, maina sy lena hisaraka
Raha tsy misaraka amin'ny mando sy maina ny trano fidiovana dia mora ny manaparitaka ny rano na aiza na aiza ao amin'ny fandroana, ary mora ho an'ny olona ny misolosolo sy mianjera, izay tsy dia manadio ihany koa.
4,Inona no olana raha manolo ny trano fidiovana mahazatra amin'ny trano fidiovana matanjaka isika?
Rehefa mametraka trano fidiovana mahazatra, matetika ny mpampiasa dia tsy manisy fiheverana ny fanovana ny rano sy herinaratra manaraka, tsy misy toerana fidiovana natokana ho an'ny famatsiana herinaratra matanjaka, ny fivoahana ary ny lalan-drano, ho sarotra kokoa ny fampiasana kabine malefaka amin'ny ho avy.
Olana mahazatra ny fanavaozana ny kabine
1, Iza no azo ampiharina kokoa, orana na koveta fandroana?
Amin'ny ankapobeny, ny fandroana dia tokony ho azo ampiharina kokoa noho ny kovetabe fandroana, ny fandroana dia ara-potoana sy mety ary azo ampiharina, mahasalama.
2,Mora ampiasaina ve ny efitra lamba mandro?
Ho an'ny ankohonana kely dia somary kely ny velaran'ny trano fidiovana, ary ny fizara fitaratra dia hahatonga ilay efitrano fidiovana kely tany am-boalohany hiseho ho be olona loatra. Avy eo ny lambam-pandroana ho fizarazarana, avy eo ny habaka manontolo amin'ny fanitarana dia malalaka kokoa sy malala-tanana.
3, Haingo an'ny efitra fandroana ao amin'ny fandroana fandroana mozika, sa mainty sy fotsy madio azo ampiharina kokoa?
Ny vokatra haingon-tarehy mozika dia tsara, saingy lafo ny vidin'ny fitaovana sy ny asa. Mafy ny hikarakara ny mozika ary mirona hanafina loto. Ka andramo ampiasaina amin'ny faritra maina!
4,Tsy azo ampiharina ny atmosfera fanoherana Countertop Basin? Ahoana no hisafidiananao ny sotasota eo an-tampon-kaonty sy eo ambanin'ny mpanohitra?
Ny lozisin'ny countertop dia misy endrika maro, safidy lehibe ary vokany firavaka tsara. Mora ny mametraka azy ary mora tazomina amin'ny ho avy. Na izany aza, mora ny manaparitaka rano any ivelany rehefa mampiasa ny tavy eo amin'ny latabatra ianao.
Eo ambanin'ilay kovetabe latabatra dia hapetaka eo afovoan'ny latabatra, izay tsara tarehy kokoa noho ny lozabe an-tsehatra, ary ny faritry ny lovia dia ambany noho ny latabatra, ka ny rano eo amin'ny takelaka dia afaka mikoriana na mamafa ao anaty tavy , ka karakaraina tsara kokoa ny fahasalamana.
5,Ny tatatra sy ny faladian'ny gorodona
Ny toerana misy ny tatatra amin'ny gorodona dia mila dinihina tsara, tsara kokoa ny hita amin'ny lafiny iray amin'ny taila, raha eo afovoan'ny efitrano fidiovana io dia tsy ny teboka ambany no ambany indrindra na dia mihodina aza ny taila.
Ny sockets dia tokony hovolavolaina amin'ny switch, indrindra ao amin'ny trano fandroana herinaratra herinaratra misy switch dia mety. Eo akaikin'ilay fantsakana dia mila mamela vitsivitsy hafa ho an'ny fitaovana mahazatra toy ny fanamainana volo, hareza ary borosy nify elektrika!
6,Fanala fanasarana ny kabine
Ny mandro dia mando kokoa ary mora voan'ny bakteria, noho izany dia hapetraka ao anaty trano fandroana ny mpankafy, izay mamaha ny olan'ny hamandoana eo amin'ny habakabaka sady mitazona ny fandroana vaovao.
7,Ny layout ny haben'ny asa tsirairay
Previous :: 4.95m2 Fomba Skandinavianina, Mahatalanjona kokoa noho ny efitrano fandraisam-bahiny ity fandroana tanora mpivady ity! Next: Fianakaviana sinoa, tena tsy mendrika fisarahana fahatelo?